Maxay tahay Sababta Maamulka Kililku ” Alshabaab Iyo Jahaad” oogu yeedhanayo- Falanqeyn – Rasaasa News
Maxay tahay Sababta Maamulka Kililku ” Alshabaab Iyo Jahaad” oogu yeedhanayo- Falanqeyn
Jun 19, 2014 Maxay tahay Sababta Maamulka Kililku ” Alshabaab Iyo Jahaad” oogu yeedhanayo- Falanqeyn
June 19, 2014 – Dalalka Carabta, gaar ahaan Hogaamiyaasha mudada badan haystay xukunka markay arkaan xoogaa xiisa dhac ah oo shacabku ama Mucaarad ku kaco, guud ahaan waxay ciyaaraan loolan Siyaasadeed oo ahaa waxaan la diririnaysa Argagaxiso!
Maamulka Kililku midiisu hada waa ka duwan tahay, sababtoo ah mahan Dowlad Caalamka Taageero ka haysta isla markaasna la aqoonsan yahay, Madaxwaynaha Maamulka Kililka wuxuu shiriyay dadweyn badan waxaana hadalkiisa oo inta badan ka muuqan jiray Ururka Gobanimo doonka ah ee ONLF, uusan hal mar soo hadal qaadin.
” Ninka Naftiisa dilaya ee is qarxinaya waxaa naloo shegay innuu cadaabka galayo, culumadiina waa tan Joogtaa, ninkaas waa in lagu jahaado” Ayuu yiri Madaxwaynaha Maamulka Kililku
Mid ka mid ah dadka Goobta ka hadlayay oo ka muuqatay astaan wadaadnimo ayaa sheegay in ay jiraan wax la dhaho ” Kalaabul Naar” isla markaas Kalaabul naarkaasu yihiin Al-Qushaasha oo looga jeedo Alshabaab, waajib qof walba ay ku tahay innuu la dagaalamo.
Madaxwaynaha Maamulka Kililka oo isagu hadalkaas raacaya ayaa yiri ” oo haddii Janadu ayba wax yar noo jirto oo aayar la iska galayo maad aadaan” su,aasha la is waydiin waxaa weeye Isagu Janada muu aado”
Waxaa ka sii daran waxaas dhan waxaa la yiri, qofkii Muslim ah ee dilaa qof kalle Muslim ah waa in lagu Jahaado! Dadka Goobta joogay ayaa is waydiiyay Liyuu Police yay dilaan maalin walba soo mahan Shacabka Soomaalida Ogaadeeniya! shalay oo u danbaysay soo Fiiq dad kuma aysan layn? Dadkaasi soo Muslim mahan!
Arrinta Diinta waa mid la siyaasadeeyay, Gaal Iyo Musliba ma banaana dhiigiisa in bilaash lagu daadiyo!
Hadaba su,aasha la is waydiin waxa weeye maxay tahay hal mar in Afka la kala qaado.
Qoddobadan ayaa meesha ka soo baxayaa suurtagalnimadooda!
1- In Itoobiya Siyaasadan ay maleegayso isla markaasna Alshabaab loo yeedhanayo lana doonayo gudaha in la soo galiyo si hadhow Caalamka loo dhaho waa nala soo galay Dadka Gobalka Ogaden deggan loo xasuuqo!
2-In Ciidamadii Liyuu Boolis ay Alshabaab laayeen Madaxwaynaha Kililka ogyahay in Ciidan uusan jirin, isna Ciidankaas uu wax ku ahaa hadana doonayo ciidan kalle oo dabka lagu shubo!
3-In Itoobiya aysan doonaynin in Alshabaab uu kaga dhinto wiil Tigree, Oromo, Axmaaro ah sheekaduna tahay Soomaalidu ha isku jabto!
4- Ciidamada Liyu Police waa wiilasheenii oo aan xuquuq lahayn daruufna lagaga faaidaysanayo, eheladii wiilaashaas way daawanayaan inay bilaash ku dhintaan, wiilka Uganda ah $3000 oo dollar ayuu qaataa, Magdhowna wuu leeyahay maxay tahay sababta dabka loogu shubo, meel 50,000 Ciidan ah Joogaan oo caalamku lacag ku siiyo! midan waa su,aal kalle oo dood ka taagan tahay!
Adigu bal akhristow maxaad ku fasiri kartaa arrimahan?
Barakicin ka Socota Gabalka Sitti
Ethiopia, oo Codsatay in la Ciqaabo Wariyeyaasha Masar!